I-Lavendel Cottage: Lindsborg
Lindsborg, Kansas, i-United States
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Mark & Nancy
I-Lavendel Cottage iyindawo enhle futhi ethokomele, esanda kulungiswa kabusha ekugcineni enyakatho yeLindsborg, Kansas! Ngokufinyelela kalula kwedolobha, i-Bethany College kanye ne-Coronado Heights, izihambeli zingakwazi ukufinyelela konke okungcono kakhulu i-Little Sweden, e-USA engakunikeza endaweni ehlanzekile, ephephile, engabhemi ehektheni elikwenza uzizwe sengathi usezweni. , nakuba empeleni usedolobheni.
Inombhede wendlovukazi kanye nombhede ogcwele ophakeme/i-bunk, i-Lavendel Cottage iyindawo ejabulisayo yemibhangqwana noma imindeni esencane, futhi inekhishi eliphelele ne-TV enezinsizakalo zokusakaza.
4.95(132 okushiwo abanye)
4.95 · 132 okushiwo abanye
Indawo esenyakatho yedolobha yaziwa ngezindawo zayo ezinkulu, izihlahla ezinkulu kanye nezakhamuzi ezinobungane. Kuthule kakhulu futhi kunokuthula futhi kuseduze nezwe, empeleni kuzwakala sengathi usezweni! Kodwa, kuseduze neBethany College, Coronado Heights, idolobha, ipaki kanye nemibukiso yobuciko.
Ibungazwe ngu-Mark & Nancy
Little Sweden U.S.A - Lindsborg, Kansas.
Singababungazi be-hand-off futhi ukuba khona kwethu kuzokhawulelwa ngesikhathi sokuhlala kwakho. Nokho, sihlala sikhuthaza izivakashi ukuthi zisithinte nganoma yimiphi imibuzo noma izinkathazo ezingaba nazo ngesikhathi sokuhlala kwazo.
UMark & Nancy Ungumbungazi ovelele